Supercell, studio avy any Failandy, no tompon'andraikitra ao ambadiky ny Clash Royale. Ity lalao ity dia iray amin'ireo trangan-javatra lehibe indrindra hitanay tamin'ireo mpampiasa Android tato anatin'izay taona izay. Ny fampidinana azy ao amin'ny Play Store dia an-tapitrisany ary nanjary iray amin'ireo lohateny fanovozan-kevitra ao anatin'ny sokajy lalao stratejika.
Raha liana amin'ny Clash Royale ianao, amin'ity sokajy ity dia ho hitanao ny karazana lahatsoratra rehetra momba ny lalao Supercell. Vaovao momba ny lalao sy ireo fanavaozam-baovao na fika hampiarahana azy. Izay rehetra tianao ho fantatra momba azy dia azonao jerena eto.
Azo zahana amin'ny beta izao ny Project Cars Go: ny lalao fifaninanana GAMEVIL
GAMEVIL dia namoaka tao amin'ny Google Play Store ny fisoratana anarana teo aloha ny Project Cars Go, ny filokana mihazakazaka ...
Ity ny lisitry ny vaovao PUBG Mobile 0.15.0 feno miaraka amin'ny angidimby, fiakarana ary maro hafa
ny Manuel Ramirez hace 2 taona .
Fotoana fohy taorian'ny nanandramana Call of Duty Mobile, avy amin'ny Tencent Games mihitsy, dia efa an-tanantsika ilay lisitra ...
Munchkin.io dia karazana royale ady io izay ahafahanao mampiasa fitaovam-piadiana isan-karazany
ny Manuel Ramirez hace 3 taona .
Munchkin.io dia karazana royale ady io izay tsy maintsy hiatrehantsika mpilalao hafa amin'ny tena izy. A…
Badland Brawl dia manolotra fizika zavatra maro sy fifandonana toa an'i Clash Royale
Badland Brawl no lalao vaovao avy amin'ireo mpamorona ny Badland sy Badland 2 voalohany, ireo sehatra misy ...
Omega Wars: Tompondakan'ny Galaxy dia manaraka aorian'ny Clash Royale, fa miaraka amin'ny Augmented Reality
Omega Wars: Tompondakan'ny Galaxy misotro mazava tsara avy amin'ny loharanon'ny aingam-panahy nomen'i Clash ...
Misimisy kokoa «Battle Royale» ho an'ny findainao Android miaraka amin'i Notorious 99 sy ny kianjan'ny mpilalao 100
Notory 99 dia tonga amin'ny Android ho Battle Royale vaovao izay hiatrehantsika mpilalao maro kokoa handresy….
Battlelands Royale dia manaraka ny dian'ny PUBG sy Fortnite, na dia amin'ny fomba fijery hafa aza
Battlelands Royale dia filokana vaovao ao anatin'ny karazana Battle Royale hanasarotana ny raharaha ...
Lalao mitovy amin'ny Clash Royale izay tsy azonao adino
ny Eder Ferreño hace 4 taona .
Clash Royale dia lalao iray izay niteraka fisehoan-javatra tena izy teo amin'ireo mpampiasa Android. Nanome laza be ny ...
Nahazo $ 1.000 miliara ny Supercell's Clash Royale tamin'ny taona voalohany
ny Manuel Ramirez hace 5 taona .
Ny andro nanombohana Supercell isam-paritra, ny APK dia nitarina manerana ny tambajotra mba ...
Clash Royale dia havaozina miaraka amin'ny maody fifaninanana vaovao, karatra sy tratra maro
Amin'izay rehetra nitranga tamin'ity fahavaratra ity tamin'ny roa andro sisa tavela tamin'ny Pokémon GO, dia hadinonay ...
Clash Royale dia hamela mangina amin'ny farany ny fanehoan-kevitra
Ireo tovolahy avy any Supercell dia tonga nanambara mialoha fa tsy hanafoana ny fihetsika amin'ny lalao ...
[APK] Sintomy ny fanavaozana vaovao an'ny Clash Royale miaraka amina litera vaovao, ny fananganana azy ho amin'ny Espaniôla sy maro hafa